Gini mere eji eme biking na - eme ka anyị daa - ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ị nwere "ikpere"
Na-eto eto na ọrịa ogbu na nkwonkwo na nsogbu ikuku?
Kedu mgbe mmetụta ahụike na-eme n'oge ndụ?
Ịgba ígwè bụ otu n'ime egwuregwu kachasị mma na-agba ọsọ ma ọ bụ mgbatị ahụ zuru oke.
Dịrị n'ahịrị - ihe mere ịgba ígwè ji eme ka anyị daa
Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ ugboro atọ ma ọ bụ anọ n'izu maka gburugburu 30 nkeji, ị nwere ike ịgbatị ndụ gị na ahụike site na iri afọ.
Mgbe ị na-agba ịnyịnya, oche ahụ na-etinye banyere 75 pasent nke ibu ahụ. N'ihi ya, nkwonkwo anaghị arụ ọrụ na ụkwụ.
Ịgba ịnyịnya ígwè na-eme ka ahụ dịkwuo mma
Ya mere, ịgba ígwè bụ ihe ọzọ dị mma maka ijikọ ọnụ. Karịsịa n'ọgụ a na-alụso oke ibu na anụ ezi na-ekwenyeghị ekwenye na-agba agba ndụ nwere mmetụta bara uru.
Otu kilogram 75 mmadụ na-ere ọkụ 720 kilocalories n'oge ọkara ọsọ naanị otu awa mgbe e mesịrị. Nke a karịrị nnọọ ụlọ mmanya chocolate.
Ọtụtụ ndị na-atụ egwu na ịgba ígwè nwere ike itinye mgbakasị ọzọ n'ahụ cartilage na-emetụta. Ma ndi ozo ndi ozo na-enye ihe niile: O bu ihe kpatara ya, ebe ogugu ikpere ikpere na-eme ka uzo bu ihe ndi ozo na mmanu. Ọzọkwa, capsule na meniscus ga-erite uru na ya.
Ọbụna ndị na-arịa ọrịa varicose anaghị eme ma ọ bụrụ na ha agbaghị. A na-ebugharị ọbara ọbara ahụ site na ihe ọbụla na ụkwụ ụkwụ, dị ka mgbapụta n'obi. Nke a na-arụ ọrụ karịa ọgwụ ọ bụla.
Ihe dị mkpa maka nsogbu ndị nwere azụ azụ: na-ege ntị mgbe niile na ị ga-ahọrọ ụgbọ okporo ígwè Dutch dịka ụgbọ okporo ígwè.
Maka mmetụta a na-ahụ anya nke ọma, ị ga-agbapụ ma ọ dịkarịa ala awa abụọ n'izu. Ejiri arụ ọrụ kwesịrị ịbawanye ụba. Iji mee ka ọnọdụ ahụ dị ike, ọ ga-ezuru ya ka ọ bụrụ na ọ gafegharịrị n'etiti etiti, na-enweghị ume.
Ọ bụrụ na ijeụkwụ dị n'ihu, a na-atụ aro ka a na-akpọ ọzụzụ oge etiti. N'ebe a, a na-agba ọsọ ọsọ na nke dị jụụ kwa minit ise ọ bụla. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, obere nkwụsị nwere ike ịtinye.
Onye na-esi n'ebe dị anya na-agba ọsọ ọsọ, na-eme ka abụba na-ere ọkụ. N'ihi ya, ịgba ígwè bụ ezigbo egwuregwu iji kwụsị ibu arọ. Ọ na-enye na -emepụta ihe ọ bụla kwa ụbọchị nke ikuku oxygen ma bụrụ nke a na-ejikarị etinye aka n'ime ndụ kwa ụbọchị. Ọbụna ụzọ a ga-esi arụ ọrụ na ịzụ ahịa nwere ike kpuchie onwe ya n'enweghị ọzụzụ site na igwe kwụ otu ebe.
Site n'ụzọ: ọzụzụ dị otú ahụ na-eme ka hormonụ na-eme ka agụụ mmekọahụ ghara ịdị ọcha na trot. E nwere asịrị na ndị na-agba ígwè bụ ndị ka mma. Otú ọ dị, ọ dịghị ihe ọmụma sayensi maka nke a. Ya mere ọ dị onye nke ọ bụla ịchọpụta.
Egwuregwu / egwuregwu na mma